စစ္ေတြ‌ေဆး႐ုံႀကီး မွာ ကိုဗစ္ လူနာေတြ ကို ကုသ ရင္း ကူးစက္ ခံလိုက္ ရတဲ့ ေရွ႕တန္း သူရဲေကာင္း မေလး ေရး တဲ့စာ - Tha Dinn Oo
စစ္ေတြ‌ေဆး႐ုံႀကီး မွာ ကိုဗစ္ လူနာေတြ ကို ကုသ ရင္း ကူးစက္ ခံလိုက္ ရတဲ့ ေရွ႕တန္း သူရဲေကာင္း မေလး ေရး တဲ့စာ
စစ္ေတြ ေဆး႐ုံႀကီးမွ ကိုဗစ္လူနာေတြကို ျပဳစု ကုသရင္း ကူးစက္ ခံရတဲ့ ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မႉးေလးကို အားေပးလိုက္ၾကပါဦး
ရက္စက္လြန္းတဲ့ ကံၾကမၼာရယ္ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္က ေရာဂါပိုး စစ္ေတြမွာ စေတြ႕ၿပီဆိုတည္းက သူတပါးအတြက္ ခံစားၿပီးေၾကကြဲ ခဲ့ရတယ္ ကိုယ့္ရည္မွန္း ခ်က္က ေရာဂါခံစားေနရသူေတြကို တတ္နိုင္ သေလာက္ကူညီမယ္ေပါ့
အိမ္မွာ မေနေတာ့ဘဲ ေဆး႐ုံမွာဂ်ဴတီဆင္းရင္း ကိုယ္တတ္ နိုင္သေလာက္ အုပ္တခ်ပ္သဲတပြင့္ ကူညီေပးခဲ့တယ္ တာဝန္ေက်ခဲ့တယ္လို႔ ခံစားမိေပမယ့္ ကိုယ္ေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြကို ကူးစက္ေစခဲ့ၿပီလဲ? ေစတနာေတြက ေဝဒနာျဖစ္ခဲ့ပီလား? ေရာဂါကင္းၿပီး ျပန္လာမယ့္တေန႔ ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ခ်င္ပါေသးတယ္ အလႉအတန္း ေတြအမ်ားႀကီးလုပ္ခ်င္ပါေသးတယ္
ေမတၱာ ေစတနာသည္ အစြမ္းထက္ေသာေဆးဝါးျဖစ္ပါေစ အျမန္ဆုံး သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းပါေစ
စစ်တွေ‌ဆေးရုံကြီး မှာ ကိုဗစ် လူနာတွေ ကို ကုသ ရင်း ကူးစက် ခံလိုက် ရတဲ့ ရှေ့တန်း သူရဲကောင်း မလေး ရေး တဲ့စာ
စစ်တွေ ဆေးရုံကြီးမှ ကိုဗစ်လူနာတွေကို ပြုစု ကုသရင်း ကူးစက် ခံရတဲ့ ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှူးလေးကို အားပေးလိုက်ကြပါဦး
ရက်စက်လွန်းတဲ့ ကံကြမ္မာရယ် တကယ်တော့ ကိုယ်က ရောဂါပိုး စစ်တွေမှာ စတွေ့ပြီဆိုတည်းက သူတပါးအတွက် ခံစားပြီးကြေကွဲ ခဲ့ရတယ် ကိုယ့်ရည်မှန်း ချက်က ရောဂါခံစားနေရသူတွေကို တတ်နိုင် သလောက်ကူညီမယ်ပေါ့
အိမ်မှာ မနေတော့ဘဲ ဆေးရုံမှာဂျူတီဆင်းရင်း ကိုယ်တတ် နိုင်သလောက် အုပ်တချပ်သဲတပွင့် ကူညီပေးခဲ့တယ် တာဝန်ကျေခဲ့တယ်လို့ ခံစားမိပေမယ့် ကိုယ်ကြောင့် ဘယ်သူတွေကို ကူးစက်စေခဲ့ပြီလဲ? စေတနာတွေက ဝေဒနာဖြစ်ခဲ့ပီလား? ရောဂါကင်းပြီး ပြန်လာမယ့်တနေ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ချင်ပါသေးတယ် အလှူအတန်း တွေအများကြီးလုပ်ချင်ပါသေးတယ်
မေတ္တာ စေတနာသည် အစွမ်းထက်သောဆေးဝါးဖြစ်ပါစေ အမြန်ဆုံး သက်သာ ပျောက်ကင်းပါစေ
“အလေးပြုပါတယ်” သီချင်းလေးကို အာဇာနည်နေ့အတွက် ဂုဏ်ပြုသီဆိုခဲ့တဲ့ အေးမြဖြူ
မြန်မာအိုင်ဒေါ Season-4 Top3ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အေးမြဖြူကတော့ မြန်မာသံပိုင်နိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်အသိမှတ်ပြုအားပေးခြင်းရရှိခဲ့သူပါ။ ငယ်ရွယ်သေးပေမယ့် အဆိုပိုင်းသာမက သရုပ်ဆောင်ပိုင်း၊ဘက်ပေါင်းစုံမှာ အနုပညာအရည်အသွေးပြည့်ဝသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက အချစ်ပိုနေရတာပါ။ အေးမြဖြူကတော့ မကြာခဏဆိုသလို မြန်မာသံစဉ်သီချင်းလေးတွေကို Cover သီဆိုကာ ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလေ့ရှိပြီး ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ အာဇာနည်နေ့အတွက် ဂုဏ်ပြုတေးသီချင်းလေးဖြစ်တဲ့ တေးသံရှင် မေလှမြိုင်သီဆိုထားတဲ့ “အလေးပြုပါတယ်” သီချင်းလေးကိုလည်း ကာဗာသီဆိုကာ မျှဝေပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးမမေ့အပ်တဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ (၇၃) ကြိမ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပြီး အေးမြဖြူကတော့ သီချင်းလေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြဖြူကတော့ ” မနက်ဖြန်မှာ ကျရောက်မယ့် အာဇာနည်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် သမီး ဒီသီချင်းလေးကို အိမ်မှာပဲ စန္ဒရားဆရာ ကိုကြီး ရဲမင်းဟန်ရောက်တုန်းလေး ဆိုလိုက်ပါတယ်” လို့ရေးသားကာ မျှဝေပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ နာမည္ႀကီး ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံ ႏွင့္ အတူ သ႐ုပ္ေဆာင္ အ ခ်ိဳ႕ ကို ရန္ကုန္ သက္ ေမြးနည္းပ ညာ ေကာလိပ္ ၏ Kindness Ambassador ခန႔္အပ္
ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ နာမည္ႀကီး ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံ ႏွင့္ အတူ သ႐ုပ္ေဆာင္ အ ခ်ိဳ႕ ကို ရန္ကုန္ သက္ ေမြးနည္းပ ညာ ေကာလိပ္ ၏ Kindness Ambassador ခန႔္အပ္ နာ မည္ႀကီး ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံ အပါအဝင္ သ႐ုပ္ ေဆာင္ အခ်ိဳ႕ ကို ရန္ကုန္ အသက္ေမြးနည္းပညာေကာလိပ္ (သာေကတ) ၏ Kindness Ambassador အျဖစ္ခန႔္အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္ ။ Yangon Vocational College of Technology ၏ Kindness Ambassador ခန႔္အပ္ပြဲ ကို အခမ္းအနား ကို သာေကတၿမိဳ႕နယ္ (၈) […]
THE VOICE ပြိုင်ပွဲ မှာ DRUM တီး တဲ့ ဗုံဗုံလေးကို ဖြာနေအောင် မီးထိုးပေး ပါ လို့ တောင်းဆို လာတဲ့ HAZEL (ရုပ်/သံ)
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ The Voice Myanmar Season2ပြိုင်ပွဲဝင် ဟေဇယ် ကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီး ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းတိုင်းလိုလို သီဆိုတတ်တဲ့ ဟေဇယ်ကတော့ အခုဆိုရင် အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာရလာပြီ လို့ဆိုရမှာပါ။ဒီနှစ်The Voice Myanmar ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ ပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေ ထက် Drum တီးတဲ့ ဘုံဘုံ ကိုပိုပြီး စိတ်ဝင်စားကြတာ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်းအသိပါပဲနော်။ငယ်ရွယ်သူဖြစ်ပေမယ့် Drum ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တီးခတ်နိုင်တဲ့ အပြင် ရုပ်ရည်ချောမောမှုကြောင့် လည်း မိန်းကလေးတွေရဲ့အသည်းစွဲ ဖြစ်နေတာပါ။ အဲ့ဒီထဲမှာ တော့ The Voice Myanmar Season2ပြိုင်ပွဲဝင် ဟေဇယ်လည်း အပါအဝင်ပါနော်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဟေဇယ်က ဗုံဗုံလေးက အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်၊လာလိုက်ရင် သူ့ကိုပဲ လိုက်လိုက် ချောင်းကြည့်နေရတာ၊ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အရမ်းတော်လို့ အားလည်းကျတယ်.ဆိုပြီး ဖြေခဲ့တာပါ။ […]
ရခိုင္ ျပည္နယ္ တြင္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း ၁၇ ဦး ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ ခံထားရ